Meydka wiil da’yar oo lagala baxay Xubnaha ugu muhiimsan jikiisa oo lasoo dhigay meel udhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. | Halganka Online
Meydka wiil da’yar oo lagala baxay Xubnaha ugu muhiimsan jikiisa oo lasoo dhigay meel udhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Dhaco kamid ah dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee ka dhaca Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu arkay Xaafadda buulo buuxay degmada wadajir ee gobolka Banaadir kadib markii dadka deegaanka Xaafadaasi ay maanta arkeen Meydka wiilka da’yar oo sida muuqanaysay lagala baxay Xubnaha ugu muhiimsan jirkiisa,kaasi oo lasoo dhigay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Wiilkan oo da’diisa lagu qiyaasay 3-sano jir ayaa waxaa lagala baxay wadnaha iyo beerka,iyadoona dadka degen hareeraha garoonka Aadan Cadde ay si aad ah ula fajaceen dhac dadan oo ah mid naadir ku ah dhagaha dadka kunool Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Ugandha ee qeybta ka ah Ciidamada Shisheeye ee jooga magaalada Muqdisho,saldhigna ku leh garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa lagu eedeeyey inay mas’uul ka yihiin falkaasi.
waxayna dadku ay taasi sabab kaga dhigayaan qaabka farsamaysan ee wiilka da’da yar wadnihiisa iyo beerkiisa loola baxay sida ay ku waramayaan qaar katirsan dadka deegaanka oo Idaacadda Alfurqaan la hadlay.
Dhacda-dan Arga gaxa leh ee ka dhacday nawaaxiga garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Magaalada Muqdisho ayaan ahayn tii ugu horaysay ee ay maqlaan dhagaha dadka kunool magaalada Muqdiso.
iyadoona maalmo ka hor isla Naxaawiga garoonka Aadan Cadde lagu arkay Meydka wiilka da’yar oo isna lagala baxay qeybaha ugu muhiimsan jirkiisa.
Si kastaba ha ahaatee Ciidamada Afrikaanka Shisheeyaha ayaa isbitaalo gaar ah waxay ka dhex sameysteen gudaha Saldhigyada ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho.
iyagoona sheegta in isbitaaladaasi ay ku daaweeyaan dadka bukaanka ah balse dadka qaar ayaa shaki xoogan waxay ka muujiyeen ujeedka ama hadafka isbitaaladaasi loo furay.
« Mooryaan Xeefoow oo ku soo fashilmay kulankii Caabudwaaq Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo Dagaal kula wareegay gacan ku haynta degmada Shibis oo ay horay u joogeen Maleeshiyaadka Xukuumada Ridada. »